Acoustic Inotenderera Inogadzirisa Wall System Kugadzira | Doorfold
Tsvaga Imwe-Stop Solution ye Acoustic Inosimudza Inogadzirisa Partition Wall Systems Kubva 2004.
Kuyambuka Partition Wall
Inofambiswa Girazi Zvikamu
Flexible Space Solution Nyanzvi
Nemakore anopfuura gumi neshanu echiitiko mukupeta uye
inotsvedza kumadziro uye inosimudza madziro indasitiri.
&Chinangwa chedu ndechekugutsa vatengi vedu nehupamhi hwakanyanya uye hwakavimbika mhando yekuona kuti mutengi wese anogona kunzwa akasununguka uye aine chivimbo nemidziyo yedu mumashandisirwo avo.Zvinhu zvedu zvinowanikwa zvakanyanya kuwana kwavo kushandiswa kubva kumusika nekuda kwezvinhu zvakanaka. Ivo vane akawanda maficha ayo anobvumidza kufarirwa uye kushandiswa.
kutsvedza kupatsanurana roller inokatyamadza chikamu zvikamu uye DF-100 kutsvedza kwekuparadzanisa paruching
soundproof partition wall yehofisi soundproof bifold magonhi ekutengesa China Ruzha rwePanolsoffice Hotera
mhando dzakasiyana dzemadziro eparutivi rweMuseum anotsvedza kupeta chikamu che art gallery gypsum bhodhi remadziro
curve inoshamisa partition wall yeMuseum Arc inotsvedza madziro emadziro ekuruswa kwe art Gallery camber inotsvedza mikova
Isu tinokufamba iwe kuburikidza neyakagadziriswa gadziriro yekuita, kubva pre-kutengesa kutaurirana, dhizaini, kugadzira, kutumira kune anoisirwa.
Isu tinopa CAD uye 3D dhizaini dhizaini. Isu tinoita zvikamu zvitatu zveQC kuona kukosha kwechigadzirwa.
Isu tagara tichitevedzera kumira kwemaitiro emagetsi ekugadzira gadziriro, kuchengetedza nguva nemutengo wemapato ese uye kuunza mapundutso akakwana kwauri.
Tinokugamuchira nehunyoro kuti ushanyire fekitori yedu.
Wedu akagoverwa chirongwa manejimendi achatungamira nekuchengeta chirongwa ichi uye achimhanya nekutarisa zviwanikwa zvinodiwa, kuronga nekutaurirana iwe pachinzvimbo chemunyori mukuru;
Tichaongorora bhajeti, zvirongwa, uye zvidhori, uye kuitisa kushanyira nzvimbo kuongororwa kuti uone chiyero uye zvinodikanwa zveprojekiti yekusimbisa nzira yakanakisa;
Wedu wakapihwa purojekiti maneja anotungamira nekuchengeta chirongwa ichi uye achimhanya nekutarisa zviwanikwa zvinodiwa, kuronga.
Isu takanyudzwa zvakakwana munyika yezvigadzirwa zvevatengi vedu. Asi isu hatisi kungokwira mune chaiwo maficha echikamu; isu zvakare tinofungidzira zvakadzama mumibvunzo yakadai se: "Chii chinoita kuti vatengi vedu 'vatengi vafarire?" "Tingaite sei kuti isu titengese" Izvi ndizvo zvatichaita newe. Uku ndiko kushandura kwatinoita chirongwa chedu kuita chirongwa chedu.
Iyo Heritage Village 2nd Floor yeDammam Saudi Arabia
Doorfold ikambani inobhadhara zvakanyanya kutarisisa kune zvigadzirwa zvemhando. Kubva pane zvakasarudzika zvigadzirwa, dhizaini, kupedzisa pakeji, isu tinogara tichiita zvakadzama kunaka kwekutonga nguva ichitevera nzira yekugadzirwa kwenyika.
Zvigadzirwa zvedu zvinoratidzwa kuti zvimirire kuyerwa kwenguva uye zvakakurumbira pakati pevatengi varidzi vevaridzi venyeredzi hotera, vakakurumbira vavaki uye zvichingodaro. Kusvika parizvino, isu tapfuura ISO 9001 yepasi rose certification.
Nemakore anopfuura gumi nemashanu eruzivo mukupeta uye kutsvedza kwekuparadzanisa madziro uye chinosimudza madziro indasitiri, Doorfold yakaunganidza ruzivo rwakakura nehunyanzvi kupa vatengi zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye kuve nechokwadi kuti vatengi vanogashira sevhisi yepamusoro yekusangana nezvimwe zvinodiwa.
Iwe unogamuchirwa kushanyira fekitori yedu kana kuti utitumire kubvunza chero nguva.
GET TAKANYANYA US
Ingosiya email yako kana nhamba yefoni mufoni yekuonana kuitira kuti tikwanise kutumira iwe yemahara quote kune yedu yakawanda yakagadzirwa zvigadzirwa!